Ndụ M Nọ Na-akawanye Njọ​—M Kwụsịrị Ịṅụ Ọgwụ ọjọọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malay Malayalam Maya Mingrelian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tongan Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba
Ndụ M Nọ Na-akawanye Njọ
Akụkọ SOLOMONE TONGA kọrọ
Nke a na-egere egere Họrọ ụdị nke ị ga-ewere Ndụ M Nọ Na-akawanye Njọ
A Mụrụ M n’Afọ: 1971
Abụ M Onye: Tọnga
Ndụ M Biri: Ana m aṅụ ọgwụ ọjọọ, a tụrụ m mkpọrọ
Anyị bụ ndị Tọnga. Ihe mejupụtara obodo anyi bụ agwaetiti otu narị na iri asaa ndị dị n’ebe ndịda ọdịda anyanwụ Pasifik. Anyị enwechaghị ihe ndị e ji ebi ndụ na Tọnga. Anyị enweghị ụgbọala ma ọ bụ ọkụ eletrik. Ma, anyị nwere pọmpụ n’ụlọ anyị, nweekwa ọkụkọ ole na ole. Mgbe ọ bụla ụlọ akwukwọ anyị mechiri, mụ na ụmụnne m ndị nwoke abụọ na-aga enyere mpa anyi aka n’ugbo ebe anyị dọrọ banana, kọọkwa ji, ede, na akpụ. Mpa m na-eji ego ndị o retara n’ihe ndị a nakwa ụmụ obere ọrụ ndị ọzọ ọ na-arụ elekọta ezinụlọ anyị. Ndị ezinụlọ anyị anaghị eji Baịbụl egwu egwu, otú ahụ ka ọ dịkwa ọtụtụ ndị bi n’agwaetiti a. N’agbanyeghị nke ahụ, anyị chere na ihe ga-eme ka ndụ anyị kakwuo mma bụ ịkwaga ná mba bara ọgaranya.
Mgbe m dị afọ iri na isii, nwanne mma m kpọọrọ anyị niile gawa Kalịfọnịa dị n’Amerịka. Ịmụta otú e si eme ihe n’ebe ahụ adịghịrị anyị mfe ma otu. Ọ bụ eziokwu na ebe ọhụrụ a anyị kwagara mere ka anyị na-enwetatụkwu ego, ma anyị bi n’ebe ndị ogbenye bi. A na-eme ihe ike ebe ahụ, na-aṅụkwa ọgwụ ike na ya. Anyị na-anụkarị ụda égbè n’abalị. Ọtụtụ ndị agbata obi anyị na-atụkwa ụjọ ndị òtù ọjọọ. Ọtụtụ ndị na-eji égbè agagharị iji chebe onwe ha ma ọ bụ iji dozie esemokwu. N’otu n’ime oge e nwere ọgba aghara, a gbara m égbè n’obi. Mgbọ égbè ahụ ka nọkwa m n’obi ruo taa.
Mgbe m bara ụlọ akwụkwọ sekọndrị, m chọrọ imewa ka ndị ndị na-eto eto ibe m. Nwayọọ nwayọọ, m bidoro ịna-aga oriri na nkwari, bụ́ ebe a na-eme ihe ọjọọ dị iche iche, na-aṅụ oké mmanya, na-eme ihe ike ma na-aṅụkwa ọgwụ ike. Ka oge na-aga, ịṅụ koken bịara rie m ahụ́. M malitere ịna-ezu ohi ka m nweta ego m ga na-eji azụ ọgwụ ike. N’agbanyeghị na ndị ezinụlọ anyị anaghị eji chọọchị egwu egwu, o nweghị ihe m mụtara na chọọchị ga-enyeliri m aka ịkwụsị nsogbu ndị ọgbọ m na-enye m ime ihe ọjọọ. A nwụchiri m ọtụtụ ugboro maka ihe ike m na-eme. Ndụ m nọ na-akawanye njọ. E mechara tụọ m mkpọrọ.
Otu ụbọchị n’afọ 1997, mgbe m nọ n’ụlọ mkpọrọ, otu onye mkpọrọ ibe m hụrụ ka m ji Baịbụl n’ụbọchị Krismas. Ọtụtụ ndị Tọnga weere ụbọchị a ka ụbọchị dị oké nsọ. Ọ jụrụ m ma m̀ ma ihe Baịbụl kwuru gbasara ọmụmụ Kraịst, mụ agwa ya na amaghị m. O gosiri m ihe Baịbụl kwuru banyere ọmụmụ Jizọs. M bịara ghọta na ọtụtụ ihe ndị a na-eme na Krismas adịghịdị na Baịbụl. (Matiu 2:​1-12; Luk 2:​5-14) Ihe ndị a m chọpụtara enyeghị m ọnụ okwu, m nọkwa na-eche na a ga-enwe ihe ndị ọzọ Baịbụl kwuru m na-amaghị. Nwoke ahụ na-aga ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova na-enwe kwa izu n’ụlọ mkpọrọ, m kpebikwara iso ya na-aga. Ụbọchị mbụ m gara, ha nọ na-amụ Akwụkwọ Mkpughe. N’agbanyeghị na ọ bụ obere ihe ka m ghọtara n’ihe niile ha kwuru, ma achọpụtara m na ihe niile ha kụziri si na Baịbụl.
Ndiàmà Jehova gwara m ka ha mụwara m Baịbụl, mụ ekweta ozugbo. Ọ bụ mgbe mbụ m matara na Chineke kwere nkwa ime ka ụwa ghọọ paradaịs. (Aịzaya 35:​5-8) Ọ bịara doo m anya na m kwesịrị ịgbanwe otú m si ebi ndụ ka m nwee ike ime ihe dị Chineke mma. Amụtara m na Jehova Chineke agaghị ekwe ka m baa na Paradaịs ma ọ bụrụ na m nọgide na-akpa àgwà ọjọọ ndị m na-akpa. (1 Ndị Kọrịnt 6:​9, 10) N’ihi ya, ekpebiri m ịkwụsị ịna-ewe iwe ọkụ, ịṅụ sịga, ịṅụ oké mmanya na ịṅụ ọgwụ ike.
N’afọ 1999, e bugara m n’ụlọ mkpọrọ ọzọ tupu mụ anọzuo mkpọrọ afọ ole a tụrụ m. O nweghị Ndịàmà Jehova m hụrụ n’ebe ọhụrụ ahụ e bugara m ruo ihe karịrị otu afọ. Ma m kpebiri ịnọgide na-eme mgbanwe ná ndụ m. N’afọ 2000, ndị ọchịchị kagburu akwụkwọ ikike m ji nọrọ n’Amerịka. Ha gbaara m ụgbọ nwa mkpi laghachị Tọnga.
Mgbe m ruru Tọnga, agbalịrị m chọta Ndịàmà Jehova ma malitekwa ịmụ Baịbụl. Ihe ndị m na-amụta na-atọ m ụtọ. Obi tọkwara m ụtọ mgbe m chọpụtara na ihe niile Ndịàmà Jehova nọ n’obodo anyị na-akụzi si na Baịbụl otú ahụ ndị nke nọ n’Amerịka na-eme.
A ma mpa m ama n’obodo anyị n’ihi na o nwere ọkwá ukwu na chọọchị. N’ihi ya, otu oge ndị ezinụlọ anyị si Amerịka lọta ụlọ ma chọpụta na mụ na Ndịàmà Jehova na-amụ Baịbụl, o juru ha anya, obi adịghịkwa ha mma. Ma ka oge na-aga, ọ masịrị ndị mụrụ m mgbe ha hụrụ na ihe ndị m mụtara na Baịbụl na-enyere m aka ịkwụsị àgwà ọjọọ ndị m na-akpabu.
M na-aṅụ kava ogologo oge kwa izu otú ahụ ụmụ nwoke ndị obodo anyị si eme
Otu n’ime ihe ndị siiri m ike ịkwụsị bụ iso aṅụ otu mmanya ọtụtụ ndị na-aṅụbiga ókè n’obodo anyị. Ọtụtụ ụmụ nwoke ndị Tọnga na-eji ogologo oge aṅụ mmanya na-akụjụ ahụ́ a na-akpọ kava. Mgbe m lọtara, m bidoro ịga ebe a na-aṅụ kava n’abalị ọ bụla. M na-aṅụgide ya ruo mgbe m na-agaghị ama onwe m. Ihe so kpatara m nsogbu a bụ na mụ na ndị na-ejighi ihe Baịbụl kwuru kpọrọ ihe na-akpachi anya. Ma, e mechara mee ka m ghọta na ihe a m na-eme na-ewute Chineke. Akwụsịrị m ịṅụbiga mmanya ókè ka ihe m nwee ike ịna-adị Chineke mma, ya anagọzikwa m.
Ebidoro m ịna-aga ọmụmụ ihe niile Ndịàmà Jehova na-enwe. Mụ na ndị na-agba mbọ ịna-eme ihe Chineke na-achọ ịna-akpachi anya nyeere m aka ịkwụsị ihe ọjọọ m na-emebu. N’afọ 2002, e mere m baptizim, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova.
Ndidi Chineke na-enwere anyị nke e kwuru okwu ya na Baịbụl, abaarala m uru. Baịbụl sịrị: “Jehova . . . na-enwere unu ndidi n’ihi na ọ chọghị ka e bibie onye ọ bụla, kama ọ chọrọ ka mmadụ niile chegharịa.” (2 Pita 3:9) Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ raghị Chineke ahụ́ ibibi ụwa ọjọọ a kemgbe, ma o kwere ka ogologo oge gafee ka ya na ndị dị ka m nwee ike ịdị mma. Obi na-atọ m ụtọ ịmara na site na enyemaka Jehova, m nwere ike inyere ndi ọzọ aka ha amata ya.
Jehova nyeere m aka ịkwụsị àgwà ọjọọ ndị gaara ata isi m. Anaghịzi m ezuru ihe ndị mmadụ iji nweta ego m ji aṅụ ọgwụ ike. Kama nke ahụ, m na-agba mbọ inyere ndị ọzọ aka ka ha na Jehova dịrịkwa ná mma. Alụrụ m Onyeàmà Jehova ibe m aha ya bụ Tea. Anyị mụtara otu nwa nwoke. Anyị na-enwekwa obi ụtọ n’ezinụlọ anyị. Anyị na-akụziri ndị mmadụ na Baịbụl kwuru na anyị ga-adị ndụ ebighi ebi na Paradaịs ebe udo ga na-adị..
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ndụ M Nọ Na-akawanye Njọ
ijwcl isiokwu 8